Ukwenziwa kweso kwindoda enkulu yabasetyhini kuyisisiseko somfanekiso wemihla ngemihla. Ngomhla wokuhlwaya, amehlo aphezulu kakhulu. Ukwenza ukwakheka okufanelekileyo, kufuneka uqwalasele ukuba kufuneka idibaniswe nesitayela kunye nomfanekiso ofanayo womfazi. Kule meko, kufuneka unqume umbala wepeyti kwaye ufunde indlela yokudibana. Ukongeza, kufuneka ukwazi indlela yokusebenzisa isithunzi somso.
Imigaqo yokusebenzisa izithunzi.
Ngaphambi kokuba usebenzise izithunzi, kufuneka wenze iinkqubo zokuhlanjululwa kwesikhumba. Le nkqubo ibalulekile ukuqinisekisa ukuba izithunzi azivuki okanye ziwe emva kwesicelo. Ukuhlanjululwa kobuso kufuneka kuqhutywe ngoncedo lweentlobo ezahlukeneyo, ama-creams, iigels zokuhlamba okanye isepha. Emva kokuhlanjululwa kwesikhumba, kubalulekile ukucwina isikhumba ejikeleze amehlo kwaye uqale ukufaka isicelo kwiinkophelo zeso, usebenzisa izi ngcebiso ezilandelayo ezivela kubaculi bezenziwe:
Ngaphambi kokufaka isicelo kwiinkophelo, sebenzisa ukhilimu onomsoco kwamehlo uze uyishiye ukuze ubambe. Emva koko, gubungela iinkophelo ngesiseko. Unako ukwenza ipowder okanye isiseko. Ukuba izithunzi zineendlela zokwakhela ukhilimu, ke le nkqubo ingenakwenziwa. Emva kwakho konke, izithunzi ezinjalo zenziwa kunye nokongezwa kwinkimbinkimbi yokunyusa, kwaye ngoko ke, xa uhamba kunye ne powder, baya kuhlahlela.
Izithunzi kufuneka zisetyenziswe kwiinkophe ngaphambi kokusebenzisa i-eyeliner okanye i-mascara. Iingqungquthela zethunzi azithethi kwi-eyelashes, kuba ziya kubanika ivolumu ngale ndlela.
Izithunzi kufuneka zisetyenziswe ngoncedo lwabafaki zicelo ezizodwa. Ngokuba izithunzi ezomileyo, i-brush enkulu kunye neenwele zendalo zifanelekile. Umthunzi weliso lesilumkiso kufuneka usetyenziswe ngamanxeba eminwe. Iimfudu zenziwa ukusuka phakathi kwekhulu ukuya kwikona yangaphandle kwiso. Kule ndlela, kubalulekile ukwandisa ubungakanani. Ngenxa yempembelelo "amehlo avulekileyo" kuyimfuneko ukugubungela ikona elingaphakathi kweso kunye nokucoca phantsi komgca wehlohlo kunye nezithunzi ezikhanyayo.
Umbala omnyama kakhulu wezithunzi zifuphi nomgca wokukhula kwee-eyelashes, kwaye i-shadow shade yee-shadows iya kwiinki.
Musa ukwenza utshintsho olubukhali, kufuneka lube lula.
Abo bafazi abathanda ukucwenga okumhlophe kufuneka bahlole ii-3-4 shades ngexesha elifanayo.
Ukwenza uguqulelo olugqithiseleyo, sebenzisa amathoni angaphezulu oncedisayo.
Ukwenziwa kwamehlo ambalwa.
Emva kweenkqubo zokucoca, ezi zilandelayo zihamba ngokulandelelana:
Izithunzi zamathambo angathathi hlangothi, awona mnyama kunobuso obuphambili, kufuneka zisetyenziswe kuyo yonke ijwabu eliphezulu, kunye nomngxuma wekona langaphakathi liso;
kumgca wokukhula kwee-eyelashes ezantsi ngebhayisiki efanelekileyo, sebenzisa izithunzi kuze kube phakathi kwekhulu leminyaka kunye neentyatyambo;
kwikhosidi ehambahambayo, sebenzisa umbala obalaseleyo, ohamba ngokugqithiseleyo ngokugqithiseleyo ngokubhekiselele kwipalethi ekhethiweyo.
Umgaqo oyintloko wokwenza i-classical yokwenza umthunzi kakuhle imida kwaye ukhethe ngokufanelekileyo imifanekiso.
I-Technique "Amehlo omsiza".
Kulo nyaka lo buchule lusetyenziswa ngokubanzi kuyo yonke indlela ebonakalayo ibonisa njengendlela yokuhamba kwexesha. Inkqubo "yamehlo atshisayo" ngolu hlobo lulandelayo:
Ukuze ufake isicelo, kufuneka usebenzise izithunzi zamanqaku ombala omnye, kodwa ngeetoni ezahlukeneyo kunye neendwangu.
Kunconywa ukuba usebenzise ipensela yomjikelezo wombala ofanayo nomthunzi omnyama owenziweyo.
Iimvulo ziphakanyisiwe kwiindawo ezithile: iifoto ezimnyama zisetyenziselwa phantsi kwexesha elihambahambayo, amathoni alula ukuya kwinqanaba eliphakathi, kunye nezona zilula kunazo zonke endaweni engaphantsi kwiletshe.
Ukongezelela, i-eyayi-eyelidi esezantsi yicwecwe, kodwa umbala wendawo uncinci kwaye kule meko kuphela imibala emibili iya kusetyenziswa: i-darkest / lightestest. Umthunzi omnyama usetyenziswa kuwo wonke umkhombisi, kodwa umthunzi olula kakhulu usetyenziswa kwikona elingaphakathi kweso.
Amacweba angaphezulu (athile) atywe.
Inendima ebalulekileyo kulo mzekelo idlalwe ngokufanelekileyo kwipalalet, kunye nomgangatho wemveliso.
Imithetho yokukhetha izithunzi zamaso ngokwemibala yamehlo.
Kwiphepha lemibala engama-7, kodwa i-shades, iitoni kunye ne-halftones kule mibala zininzi. Ukuthatha umbala ogqithiseleyo kunzima kakhulu. Ewe, xa usesitolo ungasebenzisa i-sampler ukukhetha itoni efanelekileyo, kodwa ukuba akunjalo? Ngokuqhelekileyo abafazi bakhetha izithunzi phantsi kombala wamehlo abo, kunokuba bathathele amathoni. Kwaye oku kakubi. Emva koko, izithunzi ezifaniyo kuphela ziya kunceda ukuhlukanisa amehlo kwimvelaphi jikelele. Ukuba awunjalo, ngoko badibanisa kwaye amehlo akho aya kupheliswa.
Abameli be-blue-eyed of sex fair will come up with shades of pink, purple and shades shades. Kubafazi abanamehlo aluhlaza, sebenzisa umnyama obomvu, obomvu, i-terracotta, ubhedu, isiliva-grey kunye namnyama amnyama. Amantombazana anamehlo aBrown aya kuhanjiswa ngethunzi le-ocher shades.
Ukudala umfanekiso ohambelanayo kunye nezithunzi ezikhanyayo
Indlela yokugaya kakuhle amehlo
Indlela yokwenza i-Makeup ye-Eye Emeze
Ungasusa njani ukwenziwa kwamehlo?
Zama ngezithunzi zamaso!
Ziziphi izityalo kunye nemifuno enokubaluleke kakhulu?
Kuthekani ukuba ulwalamano olusecaleni lwaba lukhulu
Ubuso kunye nokunakekelwa komzimba ekhaya
Kutheni abafazi bexoka, bethengisa, kwaye batshintshe
Iimpawu eziwusizo zesini
Ukuvuthwa, ukukhulelwa, ukukhulelwa
Isidlo kunye nama-mushroom e-porcini kunye nesipinashi
U-Anna Sedokova noSvetlana Bondarchuk abakhulelweyo bahlaselwa ngenxa yeengubo ezingaphumelelanga
Ayurveda: ukuhlambulula umzimba
Amacandelo amaqhosha ase-elite
Iimfihlelo zokupheka inkukhu edikiweyo ekhuniweyo
Ukuqashwa, njengendlela yokuqeshwa
IziNyango zoLuntu zokuSuswa koKhuselo